मलेसियामा अब देखी कामदारले लेबी तिर्न नपर्ने ? जानाकारिका लागी सक्दो शेयर गर्नुहोस ! - ramechhapkhabar.com
मलेसियामा अब देखी कामदारले लेबी तिर्न नपर्ने ? जानाकारिका लागी सक्दो शेयर गर्नुहोस !
मलेसियामा कामदारले अबदेखि लेबी तिर्न नपर्ने भएको छ । मलेसिया सरकारले रोजगारदाता कम्पनीले नै लेबी तिर्नपर्ने व्यवस्था लागू गरेको खबर नयाँ पत्रिकामा छ ।